Joe Biden oo Ruushka u diray hanjabaad, isagoo Ukraine u balan qaaday lacag fara badan. – XAMAR POST
By Mohamed Abdi Last updated Mar 2, 2022
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, ayaa u hanjabay dhiggiisa Ruushka, inuu ku soo rogi doona cunaqabateyn dheeri ah,sidoo kale, waxaa uu ku dhawaaqay in duulimaadyada Ruushka laga xayiray hawada Mareykanka.
Biden ayaa dhigiisa Ruushka Vladimir Putin, markale kaga digay weerarada uu ka wado Ukraine, isaga oo ku tilmaamay mid Kaligii-talis ah.
Ugu dambeyn waxaa uu Ukraine u ballan qaaday in uu siin doono hal bilyan oo dollar si ay dib ugu dhistaan ​​hay’adahooda, isaga oo carrabka ku adkeeyay in ciidamada Maraykanku aanay ku lug yeelan doonin dagaalka ka socda Ukraine.
Biden ayaa Khudbadiisa ku yiri: “Ciidamadeena kama garab dagaalami doonaan kuwa Ukraine, balse waxaanu xoojin doonaa talaabo kasta oo ay qadaan NATO”.
Tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda Ukraine, Mareykanka ayaa ku dhawaaqay xayiraado kala duwan oo ka dhan ah Ruushka, si loo wiiqo awoodda Ciidamada Ruushka ee dagaalka kawado qeybo kamid ah dalka Ukraine.
Diiwaangelinta Musharixiin u tartameysa kuraas lix ah oo Baydhabo ka bilaabaneysa.